Ezinye ii-mobiles zeRealme ziya kuba nomsebenzi weNightscape, ngaphandle kweRealme 3 | I-Androidsis
Imowudi yekhamera yeRealme 3 yeNightscape- ezinye iifowuni zebranti nazo ziya kuba nayo
Akumangalisi ukuba phantse yonke ifowuni entsha iza nemowudi yekhamera ezinikezelweyo yokuthatha iifoto ezikhanyayo eziphantsi. Oku kube sisiqhelo emva kwempumelelo ye- I-Pixel 3 yokuguqula imeko yokujonga ebusuku.
Iifowuni ezindala azibekwanga ecaleni njengoko abavelisi bekwazile ukwandisa inqaku kwizixhobo zabo ezindala ngokunjalo. U-Realme uphinde wajoyina i-bandwagon kunye nenqaku layo leNightscape, eyabonakala kwiRealme 3, kwaye ngoku iya kufumaneka kwezinye izixhobo ezivela kwinkampani.
NgokukaRealme, i Imowudi yobusuku uphucula kakhulu umgangatho wemifanekiso ethathwe kwiindawo ezinesibane esiphantsi kusetyenziswa indibaniselwano ye-AI kunye nokuboniswa kwesakhelo esinezixhobo ezininzi.
Iindaba ezimnandi kukuba, awunyanzelekanga ukuba uthenge iRealme 3 ukuba ufuna inqaku. Umphathi weRealme Madhav Sheth ukubhengezile oko Imowudi yeNightscape iza kuza kwiifowuni ezindala zeRealme. Nangona kunjalo, awukabikho umhla wokugqibela wokuba uza kufika nini.
I-Realme ihambelana ngokugqibeleleyo nohlaziyo kwaye umenzi uthembise ukuba zonke iifowuni zazo ziya kuhlaziywa ColorOS 6 y Android Pie kwisiqingatha sokuqala sonyaka. Siyathemba ukuba inqaku leNightscape liza nohlaziyo lwePie lwe-Android, kodwa kuya kuba kuhle ukuba ifike kwangethuba.
Kumcimbi wokuphononongwa, iRealme 3 ine-6,2-intshi IPS LCD screen ene-HD + isisombululo esine-19: 9 factor ratio (1,520 x 720 pixels) ene-Dewdrop notch kunye ne-450 nits of brightness, zonke zikhuselwe yiCorning Gorilla iglasi Iglasi 3. Kwelinye icala, idibanisa iprosesa MediaTek Helio P70 Kunye neMali-G72 MP3, 3/4 GB ye-RAM, 32/64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi kunye nebhetri yamandla angama-4,230 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Ikwanayo ne kabini 13 + 2 MP umva woluvo kunye ne-13 MP ngaphambili yokudubula ii-selfies kunye nokuqondwa kobuso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Imowudi yekhamera yeRealme 3 yeNightscape- ezinye iifowuni zebranti nazo ziya kuba nayo
Yonke imingxunya ye-screen-ye-screen ye-Galaxy S10 kunye ne-S10 +
INintendo ayifuni ukunika uluvo lwe "usurer" kwimidlalo yayo ephathekayo, ifuna ukuba ikumgangatho